တိုင်းရင်းသား လူငယ်တွေ စီစဉ်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး အနုပညာပွဲ
တိုင်းရင်းသား လူငယ်တွေ စီစဉ်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး အနုပညာပွဲ	Written by ခင်ဆုမြတ်ထွန်း	Monday, 23 April 2012 15:15	Share
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရ တက်လာပြီးနောက် အစိုးရသစ် လက်ထက် မြန်မာနိုင်ငံမှာ အပြောင်းအလဲ တော်တော်များများ ဖြစ်ပေါ်လာ နေတာကို ဖူးငုံတို့လည်း သတိထား မိကြမှာပါ။Get emergency medical help when you have some of these signs of your allergy to Celebrex: hives difficulty breathing swelling of your respective face, lips, tongue, or throat buy tadalafil online. Across all clinical tests with Cialis, reports of alterations in chromatic vision were rare < Works amazingly! No negative effects, and our sex-life is amazingvery happy girlfriend! He& s on mg and would recommend to anyone tadalafil online. argaiv1964
မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်း တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တွေနဲ့လည်း တစ်ဖွဲ့ပြီး တစ်ဖွဲ့ ဆိုသလို ငြိမ်းချမ်းရေး သဘော တူညီချက်တွေ၊ စေ့စပ် ညှိနှိုင်းမှု တွေ ရယူ နိုင်ခဲ့တာဟာလည်း နိုင်ငံသား အားလုံးအတွက် ၀မ်းသာစရာ ကောင်းတဲ့ သတင်းကောင်းတွေပါပဲ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တိုင်းရင်းသား အမျိုးပေါင်း စုံလင် လှပါတယ်။ အများစုကတော့ ဗမာ လူမျိုးတွေ ဆိုတာ အားလုံး သိကြပြီးသားပါ။ တကယ်တမ်း ပြောရမယ် ဆိုရင် ဗမာ ဆိုတာဟာလည်း မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းမှာ မှီတင်း နေထိုင်နေတဲ့ တိုင်းရင်းသား တစ်မျိုးပါပဲ။ ဒါပေမဲ့လည်း လူတချို့ အပြောအရ ဗမာဆိုရင် ဘယ်နေရာမဆို အရေးပေးခံရတယ်။ ဗမာတွေဟာ တခြား တိုင်းရင်းသားတွေကို ခွဲခြား ဆက်ဆံကြတယ် စသဖြင့် တော်တော်လေး ပြောဆိုကြတာ တွေ့ရတော့ ဗမာ ဖြစ်ရတာတောင် အားငယ်သလို ခံစားမိပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းမှာ နေထိုင်ကြတဲ့ မည်သည့် တိုင်းရင်းသား မဆို မြန်မာ နိုင်ငံသားပါပဲ။ အဲဒီလို တစ်စိတ် တစ်သဘောတည်း မထားနိုင်ကြတဲ့ အခါ၊ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်အကြား နားလည်မှုတွေ လွဲတဲ့အခါ ပဋိပက္ခတွေ ဖြစ်ပွားရပြီး၊ အဲဒီ ပဋိပက္ခ အစိုင်အခဲတွေဟာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကြီးထွား လာပြန်တော့ မဆုံးနိုင်တဲ့ စစ်ဘေး သံသရာတွေကို ခံစားကြရပါတယ်။ စစ်ပွဲတွေ ဖြစ်ကြတဲ့အခါ အဲဒီ စစ်ပွဲတွေရဲ့ ဆိုးကျိုးကို ဒေသ တစ်ခုတည်းက ခံကြရတာ မဟုတ်ဘဲ၊ တစ်နိုင်ငံလုံးက ခံစားကြရတယ် ဆိုတာကို သတိပြုသင့်ပါတယ်။ တချို့ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အမြင်မှာလည်း ကိုယ့်တိုင်းရင်းသား အရေးကိစ္စ ကိုယ်တိုင်ပဲ တွေးပူရ၊ ဖြေရှင်းရနေ တယ်လို့ မြင်နေကြတာရှိပါတယ်။ တကယ်တော့ အဲဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။ ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်မှု (Peace Building) ဆိုတာကို အားလုံးက တတ်နိုင်တဲ့ ဘက်ကနေ ၀ိုင်းဝန်းကြိုးပမ်း အားထုတ် နေကြတယ်ဆိုတာ မျက်မြင် သက်သေပါပဲ။ သူ့အတိုင်း အတာနဲ့သူ ဆောင်ရွက်ကြတဲ့ အချိန်မှာ လူငယ်တွေကလည်း သူတို့တတ်နိုင်တဲ့ ဘက်ကနေ ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်ရာမှာ ပါဝင်အားဖြည့်၊ ကူညီဆောင်ရွက် လာကြတာတွေ တွေ့ရပါတယ်။
ဒီတစ်လ အုတ်တစ်ချပ်၊ သဲတစ်ပွင့် ကဏ္ဍအတွက် လူငယ်တွေ ကြိုးပမ်း အားထုတ်ခဲ့ကြတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆိုင်ရာ အနုပညာပွဲလေး တစ်ခု အကြောင်းကို ဖော်ပြပေးဖို့ရွေးချယ် ထားပါတယ်။ အဲဒီ ငြိမ်းချမ်းရေး အနုပညာပွဲကို ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၆ ရက်နေ့က ပြင်သစ် ယဉ်ကျေးမှု ဌာနမှာ မနက် ၁၀ နာရီကနေ ည ၁၁ နာရီ အထိ ကျင်းပခဲ့တာပါ။ မနက် ၁၀ နာရီကနေ ညနေ ၄ နာရီ အထိကတော့ အခမဲ့ ၀င်ရောက်နိုင်တဲ့ အစီအစဉ် ဖြစ်ပြီး၊ ညနေ ၆ နာရီမှာ စတင်ခဲ့တဲ့ တိုင်းရင်းသားရိုးရာ အဆိုအကတွေ၊ နာမည်ကြီး တိုင်းရင်းသား အဆိုတော်တွေ ဖျော်ဖြေတဲ့ ရန်ပုံငွေပွဲ အစီအစဉ်ကိုတော့ ၀င်ကြေး ၂၅၀၀ အဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ မနက် ၁၀ နာရီမှာ အခမ်းအနားဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး၊ ကချင်ပြည်နယ် WPN (Wunpawng Nighton) အမည်ရအဖွဲ့က စစ်ဘေး ဒုက္ခသည် စခန်းတွေရဲ့ လက်ရှိ အခြေအနေကို နာရီဝက်စာ Presentation ပေးပါတယ်။ အဲဒီနောက် ဆရာ မောင်စိမ်းနီ၊ ဆရာ သစ္စာနီတို့ အပါအ၀င် မြန်မာနိုင်ငံ ကဗျာဆရာများသမဂ်္ဂမှ ကဗျာဆရာများရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ပတ် သက်တဲ့ ကဗျာများနဲ့ ကဗျာရွတ်ပွဲ အစီအစဉ်ကို တစ်နာရီကြာ တင်ဆက်ခဲ့ ပါတယ်။ ကဗျာရွတ်ပွဲ အပြီးမှာတော့ ပြင်သစ်ယဉ်ကျေးမှုဌာနရဲ့ မြက်ခင်း ပြင်မှာ လူငယ်အနုပညာရှင်များ (Performance Artists) ရဲ့ Performance Art တင်ဆက်မှုများနဲ့အတူ တစ်ပြိုင်နက်တည်းမှာပဲYangon Film School မှ တိုင်းရင်းသားများအကြောင်း ရိုက်ကူးထားတဲ့မှတ်တမ်း ရုပ်ရှင် ၄ ကားတို့ ကိုလည်း ပြသခဲ့ပါသေးတယ်။ တစ်နေကုန်ပြသထားတဲ့ Art Ehibition မှာတော့ ပန်းချီ၊ ကာတွန်း၊ ဓာတ်ပုံ၊ ကဗျာနဲ့ Digital Art တို့ကို ပြသ၊ ရောင်းချပေးခဲ့ပါတယ်။ မနက်ပိုင်း အစီအစဉ်မှာ အ၀တ်အစား၊ အမှတ်တရ လက်ဆောင်ပစ္စည်း၊ ပို့စ်ကဒ်နဲ့ အစားအသောက်တွေကို ရောင်းချပေးတဲ့ ဈေးဆိုင်ခန်းတွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီအနုပညာပြပွဲ တစ်လျှောက်ပြသ၊ ရောင်းချတဲ့ ပစ္စည်း အားလုံးဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ဆက်နွယ်တဲ့အနုပညာ ပစ္စည်းများ ဖြစ်ပါတယ်။ Performance Art များနဲ့ တင်ဆက်လို့အပြီးမှာတော့ ပန်းချီဆရာဆန်း ဦးရဲ့လက်ရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ပုံကို ဆေးနဲ့ရေးပြီး၊ နောက်ခံမှာ Peace ဆိုတဲ့ စကားလုံးများ ရိုက်နှိပ်ထားတဲ့တီရှပ်ကို ကျပ်ငွေ တစ်သိန်း တစ်သောင်းနဲ့ လေလံတင်ရောင်းချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ မနက်ပိုင်း အစီအစဉ်ကိုတော့ လူငယ် ကဗျာဆရာ တစ်ဦးက ကဗျာရွတ်ဆိုကာ အဆုံး သတ်ခဲ့ပါတယ်။ ညနေ ၆ နာရီမှာတော့ တိုင်းရင်းသား ရိုးရာ အဆိုအကများနဲ့ စတင်ခဲ့ပြီး၊ ဂီတမိတ်ရဲ့ Music Performance တင်ဆက်မှု၊ DCC ကလေး စောင့်ရှောက်ရေး ဂေဟာမှ ကလေးများရဲ့ ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုတို့နဲ့အတူ undergroundband ၂ ခုကလည်း ပါဝင် တီးခတ်ပေးထားပါတယ်။ မေတ္တာ နဲ့ ပါဝင်သီဆို ဖျော်ဖြေပေးကြတဲ့ အဆိုတော်တွေကတော့ ချိုပြုံး၊ ကေဂျာနူး၊ နောနော်၊ ဂျီလတ်၊ အောင်းလာ၊ ချစ်သုဝေနဲ့ စိုင်းအောင်ထီးခမ်းတို့ဖြစ်ပါ တယ်။ ညပိုင်းဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုများ အပြီးမှာတော့ ပွဲကိုလာရောက် ကြည့်ရှုကြတဲ့ ပရိတ်သတ်များ၊ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတဲ့ လူငယ်များနဲ့ အနုပညာရှင်များက မြက်ခင်းပြင်အလယ်မှာ ပြုလုပ်ထားတဲ့ ကျောက်တိုင်မှာ ပန်းများ ချိတ်ဆွဲကြပြီး၊ နှစ်မိနစ်ခန့် ငြိမ်သက်ကာ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဆုတောင်း ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီငြိမ်းချမ်းရေး ဆိုင်ရာ အနုပညာ ပွဲလေးကို ဖြစ်ပေါ်လာအောင် အဓိက ဦးဆောင် လှုပ်ရှား ခဲ့သူတွေကတော့ နောနော်၊ ခင်စန္ဒာညွန့်နဲ့ ဇွန်စီဆိုတဲ့ လူငယ် ၃ ဦး ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ ၃ ယောက်ထဲမှာ ဆိုရင် ဇွန်စီ ဟာ Performance Artist တစ်ယောက် ဖြစ်ပြီး၊ နောနော်ကတော့ Professional Graphic Designer တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ ခင်စန္ဒာညွန့်ကတော့ Civic Education Trainer တစ်ယောက် ဖြစ်ပါ တယ်။ အခုလို အနုပညာကိုအခြေခံတဲ့ ငြိမ်းချမ်း ရေးပွဲလေး စတင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး “ဒီပွဲကို လုပ်ဖြစ်ဖို့ နောနော်ဆီက အိုင်ဒီယာ ရတာ ပါ။ သူက ကချင်လူမျိုးလေ။ သူက သူတတ်တဲ့ အနုပညာနဲ့ သူ့ဒေသ၊ သူ့လူမျိုးတွေ ဒုက္ခရောက်နေတာကို ကူညီပေးချင်တယ်ပေါ့။ အစ တုန်းကတော့ သူက ပို့စ်ကဒ်လေးတွေ ထုတ်မယ် ရောင်းပေးကြမယ်ပေါ့။ ဒါပေမဲ့လည်း လုပ်မယ့် လုပ်တော့ ပွဲလေးတစ်ခု ဖြစ်အောင် လုပ်မယ်ဆို ပြီးတော့ လုပ်ဖြစ်သွားတာ”လို့ ပွဲစီစဉ်သူ တစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ ခင်စန္ဒာညွန့်က ဆိုပါတယ်။ ဒီပွဲကို ကျင်းပဖြစ်ခဲ့ရတာဟာ စစ်ဘေး သင့် ပြည်သူတွေကို ကိုယ် တတ်နိုင်တဲ့ဘက် ကနေ အားပေးကူညီ ပေးနိုင်စေဖို့၊ ပြည်သူလူ ထုကြားမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်မှု (Peace Building) နဲ့ ပတ်သက်တဲ့အသိပညာတွေ တိုးလာ စေဖို့အပြင် ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လူငယ် တွေရဲ့ တာဝန်ယူစိတ်ကို ပြသတဲ့ လှုပ်ရှားမှုတစ် ခုအဖြစ် ဆောင်ရွက်လိုခြင်းစတဲ့ ရည်ရွယ်ချက် တွေကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ “စစ်ဘေးသင့်ပြည်သူ တွေအတွက် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့ ညလိုအပ်နေတဲ့ ငွေကြေးကို တတ်နိုင်သလောက် ဖြည့်ဆည်းပေးချင်တယ်။
စိတ်ထဲမှာ ဒီပွဲကို လုပ်ဖြစ်သွားအောင် ပံ့ပိုးပေးတဲ့ အဓိက အကြောင်းအရင်းကတော့ လူထုကြားထဲ မှာ ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်မှုနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အသိအားနည်းနေသေးတယ်လို့ မြင်တယ်။ ဒီအစီ အစဉ်ကို လုပ်တော့မယ်ဆိုတော့ အဲဒီဒေသက လူတော်တော်များများနဲ့လည်း စကားပြောဖြစ် တယ်။ စစ်ဘေး ဒုက္ခ သည် စခန်းတွေမှာ လုပ်နေ တဲ့ သူတွေရော၊ ပွဲစီစဉ်ဖို့ စလုပ်ပြီ ဆိုကတည်းက တခြားသူတွေရော လူတော်တော်များများနဲ့ စကားပြောဖြစ်တဲ့ အခါကျတော့ လူထုကြားထဲမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အများစု သိထားတာက အရမ်းကို အားနည်းနေတယ်။ ငြိမ်းချမ်း ရေးလက်မှတ်တွေ ထိုးပြီးနေကြပြီပဲ။ ငြိမ်းချမ်းနေ ပြီ မဟုတ်ဘူးလား။ နင်တို့က ဘာလုပ်ဦးမှာလဲ ဆိုပြီး မေးကြတယ်”လို့ ခင်စန်္ဒာညွန့်က သူ့ရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ အခု လက်ရှိ ငြိမ်းချမ်းရေး သဘော တူညီမှု လက်မှတ် ရေးထိုးကြတာတွေ၊ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး ဆိုတာတွေဟာ ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်မှု (Peace Building) ခရီးရှည် ကြီးရဲ့အစပြုဖြစ်စဉ်၊ ပထမ ခြေလှမ်းပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။ တစ်ခဏတွင်းချင်း၊ အချိန်တို အတွင်းမှာပဲ ပြီးမြောက် သွားနိုင်တဲ့ ကိစ္စ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒါ တွေကို သိမထားဘူး။ အသိပညာ အားနည်းသွား ရင် ဘာတွေ ဖြစ်လာနိုင်မလဲ ဆိုတဲ့ အချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး “အဲဒီလို အသိပညာ အားနည်းသွားရင် စိုးရိမ်မိတာက အခု အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး ကိစ္စတွေပြီးသွားရင် နောက်ပိုင်း Political Dialogue တွေ လာတော့မယ်။ အဲဒီ အခါကျရင် အစိုးရမူ ၀ါဒပိုင်းအရရော ပြန်လည် ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်း တွေကို စနစ်တကျ လုပ်လာ ရတော့မယ်။ အဲဒီလို အချိန်မှာ ပြည်သူလူထု အနေနဲ့ ပါဝင်စောင့်ကြည့် မှု၊ ပံ့ပိုးပေးနိုင်မှု မရှိဘူး။ မီဒီယာ ပိုင်းကလည်း အားနည်းနေမယ် ဆိုရင် ပြန်လည် ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းတွေပါ အားနည်း သွားနိုင်တယ်”လို့ သူမ ရဲ့အမြင်ကို ပြောပါတယ်။ ဒီငြိမ်းချမ်းရေး အနုပညာပြပွဲ ဖြစ်ပေါ်လာ အောင် ၃ လ နီးပါး အချိန်ယူခဲ့ရတယ်လို့ သိရ ပါတယ်။ စစ်ဘေး ဒုက္ခသည် စခန်းတွေကို သွား ရောက် ကူညီဖို့ ဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့နောက်၊ အဲဒီ စိတ် ဓာတ်ခွန်အားတွေနဲ့ အတူ လူသားအားလုံး ပါဝင် စီးမျောနိုင်တဲ့ အနုပညာကို အခြေခံပြီး ဆောင် ရွက်ဖို့ ရွေးချယ်ဖြစ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပွဲကို စတင် အကောင်အထည် ဖော်ဖို့အတွက် ပထမဆုံး အနေနဲ့ Facebook မှာ Page တစ်ခု ဖွင့်ဖြစ်ခဲ့ပါ တယ်။ အဲဒီ Page ကတစ်ဆင့် လက်ရှိ Facebook မှာ Peace Campaign လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ ချိတ် ဆက်မိခဲ့ပြီး၊ စိတ်ပါဝင်စားသူ အလှူရှင်များနဲ့ အကူအညီပေးချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း အသိပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ “Facebook မှာ Peace Campaign လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့ ၄ ဖွဲ့ကသူတို့အတွက် ဆိုင်ခန်းခင်းပေးစရာ မလိုဘူး။ နေရာစီစဉ်ပေးရုံ ပဲပေါ့။ ရောင်းလို့ရသမျှ အမြတ်အားလုံးကို လှူ မယ်ဆိုပြီးတော့ ကမ်းလှမ်း လာကြပါတယ်။ ငြိမ်း ချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အ၀တ်အထည်၊ အိတ်နဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေ အပြင် အစားအသောက် တွေလည်း ရောင်းချ ပေးပါတယ်။ Art Exhibition မှာ ရောင်းချလို့ရတဲ့ အနုပညာပစ္စည်း အားလုံးကိုလည်း အနုပညာရှင်တွေက သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ ရာခိုင်နှုန်းအလိုက် လှူဒါန်းပါတယ်။ တချို့ကလည်း ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း အကုန်လှူပါတယ်။ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ ၃၅ ရာခိုင်နှုန်း၊ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း အသီးသီး လှူဒါန်းကြပါတယ်။ စုစုပေါင်း အနုပညာ ပစ္စည်း ၁၁ ခုရောင်းရပါတယ်”လို့ မခင်စန္ဒာညွန့်က ပွဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေး အနုပညာ ပြပွဲကို အဓိကဦးဆောင်သူ ၃ ယောက်ဟာ တစ်ဦးချင်းစီအနေနဲ့ အတွေ့အကြုံ ရှိပေမဲ့လည်း အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေနဲ့ မဟုတ်ဘဲ လူငယ်တွေ ကိုယ်တိုင်ဦး ဆောင် လှုပ်ရှားခဲ့ရတာမို့ အခက်အခဲတွေလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။ “ပွဲစီစဉ်တာ၊ အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ လုပ်ကိုင်ရတာ၊ ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေ လုပ်တာက တစ်ဦး ချင်းစီမှာတော့ အတွေ့အကြုံတွေ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီလိုပွဲအမျိုးအစားမျိုး၊ အနုပညာကိုအခြေခံထားတဲ့ တစ်နေကုန်စီစဉ်ရတဲ့ ပွဲကြီးမျိုးကတော့ ပထမဆုံးပဲ။ စတိတ်ရှိုးလည်း ပါသေးတယ်ဆိုတော့ တီးဝိုင်းတွေ၊ မီး(Lighting)တွေနဲ့ နောက်ပြီး ၀င်ကြေးသတ်မှတ်ရတာစတဲ့ ဂီတဖျော်ဖြေပွဲ တစ်ခုကို အရင်က တစ်ခါမှ မစီစဉ်ဖူးပါဘူး။ တကယ့်ကို ကြီးမား၊ ကောင်းမွန်တဲ့ အတွေ့အကြုံ တစ်ခုကို ရလိုက်တာပါပဲ။ တခြားအနုပညာပွဲတွေ ထက်စာရင် ၀င်ကြေး ၂၅၀၀ ဆိုတာသက်သာတယ် ဆိုပေမဲ့လည်း Commercial Music Concert တွေလို တကယ့်ကို ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆန်ဆန် နာမည်ကြီး အနုပညာရှင် တွေကို အခြေခံပြီး လုပ်တာလည်း မဟုတ်ဘူး။ ရန်ပုံငွေပွဲလည်း ဖြစ်တယ်ဆို တော့ ၀င်ကြေး ၂၅၀၀ ဆိုတာ များနေသလား ဆိုပြီး ပြန်ကြားရတာတွေ ရှိပါ တယ်။ တကယ်တော့ လက်မှတ်စီစဉ် လိုက်ရတယ်ဆိုတာကလည်း လာကူညီ ပေးတဲ့ သူတွေ၊ မေတ္တာနဲ့ပါဝင် သီဆိုဖျော်ဖြေ ပေးသူတွေ၊ တီးခတ် ပေးတဲ့သူ တွေကို ကျွေးမွေးဖို့နဲ့ အလှူငွေ အတွက်လည်း ရအောင်ဆိုပြီး သတ်မှတ်လိုက် ရတာပါ”လို့ ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အခက်အခဲတချို့ကို ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ ဒီအနုပညာပြပွဲဟာ ထင်ထားတာထက် ပိုပြီး ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်လည်း ဖြစ်သွားတယ်၊ အောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့လည်း ပြီးဆုံး သွားခဲ့တယ်၊ လူထုကြား ထဲမှာလည်း အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ပျံ့နှံ့သွားစေခဲ့တယ် ဆိုတဲ့ အချက်တွေ ကြောင့် လူငယ်တွေရဲ့ ဆန္ဒတွေလည်း ပြည့်ဝနိုင်ခဲ့မှာ သေချာပါတယ်။ အဲဒီ အနုပညာ ပြပွဲမတိုင်ခင်ကတော့ တကယ့် ကိုခေါင်းစားခဲ့ကြရမဲ့ အချိန်တွေပါပဲ။ ကျွန်မ မကြာခဏ ပြောလေ့ရှိတဲ့ လူငယ်တွေရဲ့ သဘာဝ တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဖြစ်ချင်တာကို ဖြစ်အောင်၊ မရရ အောင် ကြိုးစား အားထုတ်တတ်တဲ့ သူတို့တွေရဲ့ ဇွဲကြောင့်ပါပဲ။ “တကယ်တမ်း ဒီပွဲကိုတာဝန်ခံပြီး လုပ်တဲ့သူကတော့ ၃ ယောက်ပဲ။ တကယ်တမ်း လုပ်ဖြစ်တဲ့ အခါကျတော့ လူငယ် အယောက် ၂၀ ကျော် ၃၀ နီးပါး လောက်က ပါဝင်ခဲ့ကြပါ တယ်။ ၀ိုင်းဝန်းလုပ်ဆောင်ကြတာပေါ့။ အခက် အခဲကတော့ လူငယ်တွေချည်းပဲ လုပ်တာ လည်း ဖြစ်တယ်။ အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့လည်း မဟုတ် တော့ ငွေကြေးအခက်အခဲရှိတယ်။ မတည်ငွေ ဆိုတာလည်း မရှိဘူး။ အလုပ်စပြီးလုပ်ဖြစ်သွား အောင် ဆိုပြီး၊ အလှူလိုက်ခံဖို့အတွက် ပွဲအကြောင်းရေးထားတဲ့ Commercial Music Concert တွေ လုပ်တယ်။ ဒီစာရွက်စာတမ်းတွေ အတွက်အရင်ဆုံး နှစ်သောင်းခွဲ၊ သုံးသောင်း လောက်ကို အားလုံးစိုက်ပြီး အရင်းအနှီးလုပ်ခဲ့ တာပေါ့။ လှူတဲ့အခါ တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီ က လှူတာ ပိုများတယ်။ အားလုံး စုစုပေါင်း လှူဒါန်းကြတာ ၁၅ သိန်း ၁ သောင်း ရှိပါတယ်။ တကယ်တမ်း ပွဲကုန်ကျစရိတ်က သိန်း၂၀ ကျော် ပါတယ်။ ပွဲမတိုင်ခင် အားလုံးလှူဒါန်းထားတဲ့ အထဲက ပို့စ်ကဒ်လေးတွေလုပ်ပြီး ရောင်းပါ တယ်။ ပွဲလုပ်ပြီး ဈေးရောင်းရတဲ့ ငွေတွေလည်း ရှိတော့ နည်းနည်းတော့ ကာမိပါတယ်”လို့ ဆိုပါ တယ်။ ငွေကြေး အခက်အခဲကြောင့် တချို့အစီအစဉ် တွေကို စိတ်ရှိတာထက် တတ်နိုင်သမျှချုံ့ပြီး လုပ်ရတာ၊ ဟာကွက်လေးတွေ ရှိခဲ့တယ် ဆိုပေ မဲ့ ဒီပွဲကို စီစဉ်ပြီးတဲ့ အခါမှာတော့ အတွေ့အကြုံ၊ သင်ခန်းစာ ယူစရာတွေ ရခဲ့ပါတယ်။ “ဟာကွက် တွေ အများကြီး ဖြစ်သွားတာ ရှိပါတယ်။ ဥပမာ-အဆိုတော်တွေ၊ လာရောက် ကူညီအားပေးတဲ့ သူတွေအတွက် နေရာထိုင်ခင်းက အစ တခြား ဂုဏ်ပြုလက်ဆောင်လိုမျိုးလည်း ဘာတစ်ခုမှ ပြန် မပေးလိုက်နိုင်ဘူး။ ကျွန်မတို့ရတဲ့ သင်ခန်းစာ တစ်ခုကတော့ အစီအစဉ်တွေ လုပ်တဲ့နေရာမှာ အားနည်းနေပါသေးတယ်။ နောက်ပိုင်းပွဲတွေ စီစဉ်ဖို့အတွက် စိတ်ရဲသွားတာပေါ့။ နောက်ထပ် စီစဉ်တဲ့အခါ ဒီထက်ပိုပြီး အောင်မြင်တဲ့ ပွဲတွေကို စီစဉ်နိုင်မယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ အစပိုင်းမှာ Volunteer ပိုင်း အရမ်းလိုအပ်တယ်။ နောက်ပိုင်း တကယ်တမ်း လုပ်ဖြစ်တဲ့အခါ တိုင်းရင်းသား ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေ အားလုံး၊ သူငယ်ချင်းတွေ အားလုံး ကူညီကြပါတယ်” ဒါကတော့ ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အတွေ့အကြုံ တွေကို မခင်စန္ဒာညွန့်က ပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါ တယ်။ လှူဒါန်းမယ့် စခန်းတွေနဲ့အရေအတွက်တွေ ကို ကြိုတင် ရွေးချယ် ထားတာမျိုး မဟုတ်ဘဲ စခန်းတွေမှာ လက်ရှိ လုပ်ကိုင်နေတဲ့ အဖွဲ့တွေနဲ့ တွေ့ဆုံပြီး၊ နောက်ဆုံး သိရတဲ့ သတင်းအချက် အလက်တွေ အရ ရရှိထားတဲ့ ငွေပမာဏနဲ့ အမှန် တကယ်ပံ့ပိုးဖို့ လိုအပ်နေတဲ့ စခန်းတွေကို ဆုံးဖြတ် ရွေးချယ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။“လောလော ဆယ်မှာတော့ လက်ရှိရထားတဲ့ငွေသားပဲ လှူမယ် လို့ စဉ်းစားထားတယ်။ ကျွန်မတို့ ဒီဘက်ကနေ သွားရောက်လှူဒါန်းနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ ငွေသားအပြင် နီးစပ်ရာ သူငယ်ချင်း တွေ၊ အဖွဲ့တွေကနေ ပစ်္စည်းတွေပါတစ်ပါတည်း ထည့်ဝင်လှူဒါန်း ပေးလိုက် ချင်တယ်ဆိုတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ တကယ်လို့အကြောင်းအမျိုးမျိုး ကြောင့် ကျွန်မတို့မသွားနိုင်ရင်လည်း အဲဒီဘက်က အဖွဲ့တွေကို ဖိတ်ခေါ်ပြီး မီဒီယာတွေနဲ့အတူ အလှူငွေကို လွှဲပြောင်းပေးအပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်” လို့ လှူ ဒါန်းမယ့် အစီအစဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ အဓိက အနေနဲ့ဒီငြိမ်းချမ်းရေး အနုပညာပွဲကနေတစ်ဆင့် တိုင်းရင်းသား ညီအစ်ကို မောင်နှမတွေကို သိစေချင်တာက “သြော်...မနက်ကနေ ညနေအထိ တစ်နေကုန် ငါတို့ဒေသတွေမှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အခြေအနေတွေ အတွက် သူတို့စိတ်ထဲ၊ နှလုံးသားထဲမှာထားပြီး လုပ်ပေးနေတာပဲ ဆိုတာကို သူတို့ သိမယ်ဆိုရင် အားဆေးတစ်ခွက် ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ယုံတယ်။ သူတို့ဆီကို တစ်ဆင့် စကားတစ်ဆင့် ကြားပြီး ငါတို့ ကချင်ဒေသမှာ ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စ ငါတို့ တိုင်းရင်းသားတွေကပဲ အရေးကြီးတယ်လို့ စဉ်းစားတာ မဟုတ်ဘဲ မြန်မာပြည်မှာ နေထိုင်ကြတဲ့ ညီအစ်ကို မောင်နှမတွေ အားလုံးကလည်း အရေးကြီးတယ်လို့ စဉ်းစားပေးပါလား ဆိုပြီး အဲဒီလိုမျိုးလေး သိသွားနိုင်လိမ့် မယ်ထင်တယ်။ သိသွားနိုင်ခဲ့မယ် ဆိုရင်တော့ အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ရလဒ်တစ်ခု လို့ မြင်စေချင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရရှိလာတဲ့ စုစုပေါင်းလှူဒါန်းငွေဟာ အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိပဲ ထောက်ပံ့ နိုင်မှာမို့၊ စခန်းတွေ အားလုံးကိုတော့ ထောက်ပံ့ ပေးနိုင်မှာ မဟုတ် ပါဘူး။ ကူညီ ပေးနိုင်သလောက်ကို အကူအညီ ပေးနိုင်မှာကတော့ ၀မ်းသာ စရာ ကောင်းပါတယ်။ အဲဒီဒေသက သူတွေကတော့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရော၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါ လိုအပ်ချက်တွေ ရှိနေမှာပါ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက် တွေ လျော့ပါးသွားစေဖို့၊ ကုစားပေးနိုင်ဖို့ အထူးသဖြင့် ကလေး သူငယ်တွေ အတွက် အဲဒီဒေသတွေကိုသွားပြီး ကလေးများနဲ့ အတူနေကာ ပန်းချီဆွဲသင် ပေးခြင်း၊ အနုပညာကို အခြေခံတဲ့အစီအစဉ်တွေ ပါဝင်တဲ့ခရီးကိုလည်းသွား နိုင်အောင် စီစဉ်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီငြိမ်းချမ်းရေး အနုပညာပြပွဲ ကတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် လှုပ်ရှားမှုတွေ လုပ်ဆောင်နေတဲ့ လူငယ်တွေ အတွက် လမ်းခင်းပေးလိုက် သလိုပါပဲ။ လူငယ်များရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး အနုပညာ ပြပွဲအကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး Facebook မှာ Save the war victims ဆိုပြီး ရှာလိုက်ရင် အလွယ်တကူ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကိစ္စတွေကို ရှေ့မျိုးဆက်တွေကတည်း က ဆောင်ရွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်မျိုးဆက်သစ်တွေကလည်း ဆက်လက် လုပ်ဆောင်သွားရဦးမှာပါ။ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာ မျိုးဆက်တစ်ခုတည်းနဲ့ ပြီးဆုံးသွားနိုင်တဲ့ကိစ္စ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် လည်း နောင်အနာဂတ်မှာ လူငယ်တွေ မလွဲမသွေကြုံကြရမယ့် တာဝန်တစ်ခု ပါပဲ။ တာဝန်ကြီးသလို တာဝန်လည်းရှိပါတယ်။ လူငယ်တွေရဲ့ အားနဲ့ငြိမ်း ချမ်းရေးဆိုင်ရာ ၊ နိုင်ငံ့အရေးအရာ ကိစ္စတွေကို လျစ်လျူရှုမထားဘဲ တာဝန် ယူစိတ်အပြည့်နဲ့ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုအဖြစ် ဆောင်ရွက်ကြတာလေးစား စရာ ကောင်းပါတယ်။ ဖူးငုံတို့လမ်းဟောင်းအတိုင်း မလျှောက်ကြတော့ဘဲ လမ်း သစ်ထွင်ကာ ဘာအရာမဆို ကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်တယ်လို့သဘောထားပြီး ငြိမ်း ချမ်းရေးနဲ့နိုင်ငံ့အရေးတွေမှာ အုတ်တစ်ချပ် သဲတစ်ပွင့် ပါဝင်နိုင်ကြပါ စေ။ ဒီဆောင်းပါးအတွက် ပံ့ပိုးပေးတဲ့ သင်ဇာဦးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ခင်ဆုမြတ်ထွန်း(Teen Magazine April 2012)
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုလွန်ကဲတဲ့ Bobby Soxer
We have 133 guests online	and views	© 2008-2010 Shweamyutay.com. All rights reserved.